Ukubuka konke kwe-Cycloastragenol
ICycloastragenol (CAG) eyaziwa nangokuthi i-T-65 iyi-tetracyclic triterpenoid etholwe ku I-Astragalus membranaceus isitshalo. Yaqala ukutholwa nini I-Astragalus membranaceus extract yayihlolwa ngezithako zayo ezisebenzayo ezinezakhiwo ezilwa nokuguga.
I-cycloastragenol nayo ingasuselwa ku-Astragaloside IV ngesenzo se-hydrolysis. I-Astragaloside IV iyisithako esikhulu esisebenzayo ku I-Astragalus membranaceus imifino. Yize i-Cycloastragenol ne-Astragaloside IV zifana nokwakheka kwazo kwamakhemikhali, i-cycloastragenol ilula isisindo samangqamuzana kune-Astragaloside IV. Ngenxa yalokho, i-Cycloastragenol isebenza kahle kakhulu ngenxa yokutholakala okuphezulu kwe-bioavailability futhi ngenxa yalokho imetabolism ephezulu ye-cycloastragenol. I-metabolism ephezulu ye-cycloastragenol ibonwa ku-epithelial yamathumbu ngokusabalalisa okungahambi kahle.
Umuthi we-astragalus usetshenziswe njengomuthi wendabuko waseChina amakhulu eminyaka futhi uyasetshenziswa nanamuhla. Isitshalo se-Astragalus sisetshenzisiwe ngenxa yemiphumela yaso enenzuzo kubandakanya i-anti-bacterial, anti-inflammatory kanye nokukwazi ukuqinisa amasosha omzimba.
I-CAG ikhonjiswa njengenhlanganisela yokulwa nokuguga eyenza umsebenzi we-enzyme telomerase nokupholisa amanxeba. Okwamanje iyinhlanganisela enkulu eyaziwa ukwengeza i-telomerase kubantu, ngakho-ke kuyisengezo sethemba elihle lokuthuthuka okuqhubekayo.
I-cycloastragenol ikhonjwa njenge-activator ye-telomerase, edlala indima ekwandiseni ubude bama-telomere. Ama-Telomeres amakepisi okuvikela aqukethe ukuphindaphinda kwe-nucleotide ekugcineni kwe-chromosome. Lawa ma-telomere aba mfushane njalo emva kokuhlukaniswa kwamaseli okuholela ekuthambekeni kwamaseli nokuwohloka. Ngaphezu kwalokho, ama-telomere nawo angancishiswa ngokucindezeleka okwenziwe nge-oxidative.
Lokhu kuncishiswa okwedlulele kwama-telomere kuhlotshaniswa nokuguga, ukufa nezinye izifo ezihlobene ne-ag. Ngenhlanhla, i-telomerase enzyme iyakwazi ukukhulisa ubude balawa ma-telomere.
Yize kungekho zifundo ezibanzi zokufakazela amandla we-cycloastragenol yokwelula impilo, iyinhlanganisela ethembisayo yokulwa nokuguga. Kukhonjisiwe ukuthi kuqeda izimpawu zokuguga kufaka phakathi imigqa emihle nemibimbi. I-CAG nayo inganciphisa usongo lokuhlaselwa yizifo eziwohlokayo ezifana ne-Parkinson, I-Alzheimer's, namakhathakhatha.
Ngaphandle kokuningi izinzuzo zezempilo ze-cycloastragenol, kunokukhathazeka ukuthi kungaholela kumdlavuza noma kusheshise umdlavuza. Kodwa-ke, ezinye izifundo ezenziwa nezihloko zezilwane zibika izinzuzo ze-cycloastragenol ngaphandle kwesifo somdlavuza.
I-cycloastragenol powder iyathengiswa itholakala kalula ku-inthanethi futhi ingathengwa kubahlinzeki abaningi abaziwayo be-cycloastragenol.
Yize kunjalo, izinzuzo eziningi ze-cycloastragenol zezempilo zikhonjisiwe, kuseseyilungu elisha elingaphansi kwezifundo. Ngaphezu kwalokho, imiphumela emibi ye-cycloastragenol ayicaci kahle, yingakho kufanele isetshenziswe ngokuqapha.
I-Cycloastragenol iyinhlanganisela ye-triterpenoid saponin etholakala empandeni ye-Astragalus herb. I-Astragalus membranaceus isitshalo besisetshenziswa emithini yendabuko yamaShayina (TCM) iminyaka engaphezu kwengu-2000 futhi sisasetshenziswa ekulungiseleleni amakhambi.
Ikhambi le-astragalus laziwa ngekhono lalo lokwenza ngcono amasosha omzimba, livikele okuphilayo, lisebenze njenge-diuretic kanye neliphethe enye impilo izakhiwo ezifana ne-anti-hypersensitivity, antibacterial, anti-ukuguga nezinzuzo zokulwa nengcindezi.
ICycloastragenol eyaziwa kakhulu njenge I-TA-65 kodwa futhi kubhekiswe kukho njengeCyclogalagenin, Cyclogalegenin, Cyclogalegigenin, ne-Astramembrangenin. ICycloastragenol ukwengeza yaziwa kakhulu njenge-anti-aging agent, noma kunjalo, ezinye izinzuzo zezempilo ze-cycloastragenol zifaka phakathi ukuqinisa amasosha omzimba, izakhiwo ezilwa nokuvuvukala nezokulwa ne-oxidative.
ICycloastragenol ne-Astragaloside IV
Kokubili i-cycloastragenol ne-Astragaloside IV kwenzeka ngokwemvelo ekukhishweni kwesitshalo se-astragalus. I-Astragaloside IV iyisithako esiyinhloko esisebenzayo ku i-astragalus membranaceusKodwa-ke, kwenzeka ngobuningi beminithi empandeni. Inqubo yokukhipha la ma-saponin, i-cycloastragenol ne-astragaloside IV, imvamisa inzima ngenxa yezinga eliphakeme lokuhlanzwa elidingekayo.
Ngambili kokubili i-cycloastragenol ne-astragaloside IV zitholakala kumuthi we-astragalus, i-cycloastragenol nayo ingatholwa ku-astragaloside IV ngenqubo ye-hydrolysis.
Lezi zinhlanganisela ezimbili zinezakhi zamakhemikhali ezifanayo, kodwa-ke, i-cycloastragenol ilula esisindo samangqamuzana kune-astragaloside IV futhi futhi ayitholakali.
Indlela Yokusebenza Ye-Cycloastragenol
i. Ukwenza kusebenze i-Telomerase
Ama-Telomeres aphinda i-nucleotide emaphethelweni ama-chromosomes aqondile futhi aboshwe isethi ethile yamaprotheni. Ama-Telomeres ngokwemvelo ayancipha ngakho konke ukwahlukana kwamaseli. I-Telomerase, i-ribonucleoprotein complex equkethe ama-enzymes e-catalytic reverse transcriptase (TERT) kanye nengxenye ye-telomerase RNA (TERC) eyandisa ama-telomeres. Njengoba indima esemqoka yama-telomere ukuvikela ama-chromosomes ekuhlanganiseni nasekulweni, amaseli ngokuvamile abona ama-telomere amafushane ngokweqile njenge-DNA eyonakele.
Imiphumela yokuqalisa ukusebenza kwe-cycloastragenol telomerase ekwandiseni ama-telomere nayo ekhombisa imiphumela ezuzisayo.
ii. Ithuthukisa i-lipid metabolism
I-Lipids ngokwemvelo isebenza njengesitolo samandla emizimbeni yethu. Kodwa-ke, amaningi ala ma-lipids angalimaza impilo yethu.
I-cycloastragenol ithuthukisa i-lipid metabolism enempilo ngokusebenzisa ama-biomarker ahlukahlukene e-lipid metabolism.
Okokuqala, ngamanani aphansi, i-CAG inciphisa amaconsi e-cytoplasmic lipid kuma-adipocyte e-3T3-L1. Okwesibili, lapho isetshenziswa ngemithamo ephezulu, i-CAG ivimbela ukwahlukaniswa kwama-preadipocyte e-3T3-L1. Ekugcineni, i-CAG ingadala ukungena kwe-calcium ku-3T3-L1 preadipocytes.
Njengoba i-calcium ephezulu ye-intracellular ingavimbela ukwehlukaniswa kwe-adipocyte, i-CAG iletha ibhalansi ku-lipid metabolism ngokukhuthaza ukungena kwe-calcium.
Iii. Umsebenzi we-antioxidant
Ukucindezeleka okwenziwe nge-oxidative kuyimbangela yezifo eziningi kanye ne-cell senescence. Ukucindezeleka okwenziwe nge-oxidative kwenzeka lapho kunokuningi kwama-radicals mahhala emzimbeni.
I-cycloastragenol ikhombisa izakhiwo ezilwa ne-oxidative ngokwandisa amandla e-antioxidant. Lo msebenzi we-antioxidant uhlobene neqembu le-hydroxyl elitholakala ku-CAG.
Ngaphezu kwalokho, ukucindezeleka okwenziwe nge-oxidative kuyimbangela enkulu yokufinyezwa kwe-telomere, ngakho-ke ukuvikelwa kwe-CAG telomere kususelwa kukho kokubili umsebenzi we-antioxidant kanye nokusebenza kwe-telomerase.
iv. Umsebenzi olwa nokuvuvukala
Ngenkathi ukuvuvukala kuyindlela yemvelo umzimba olwa ngayo nokutheleleka noma ukulimala, ukuvuvukala okungapheli kuyingozi. Ukuvuvukala okungapheli kuhlotshaniswa nokuphazamiseka okuningi okufana nenyumoniya, isifo sikashukela, ukuphazamiseka kwenhliziyo nemithambo yegazi.
I-cycloastragenol powder ibonisa izakhiwo ezilwa nokuvuvukala. Izinzuzo ezilwa nokuvuvukala kwe-cycloastragenol zenziwa ngezindlela ezahlukahlukene kufaka phakathi ukuvimbela ukwanda kwe-lymphocyte nokwenza ngcono i-AMP-activated protein kinase (AMPK) phosphorylation.
i.I-cycloastragenol namasosha omzimba
I-cycloastragenol ingasiza ekuthuthukiseni ukuzivikela komzimba ngokukhulisa ukwanda kwe-T lymphocyte. Amandla we-cycloastragenol supplement ukwenza kusebenze i-telomerase iyenza ikwazi ukuvuselela ukulungiswa kwe-DNA ngenkathi ihola ukukhula nokukhula kwe-telomere.
I-cycloastragenol anti-ukuguga properties ziyintshisekelo enkulu yocwaningo oluningi namuhla. I-CAG ikhonjisiwe ukuthi ibambezela ukuguga kubantu kanjalo nokunciphisa izimpawu zokuguga ezifana nemibimbi nolayini abahle. Umsebenzi we-Cycloastragenol wokulwa nokuguga utholakala ngezindlela ezine ezihlukile. Izindlela zokulwa nokuguga ze-cycloastragenol zifaka;
Ukulwa nokucindezeleka okwenziwe nge-oxidative
Ukucindezeleka okwenziwe nge-oxidative kwenzeka ngokwemvelo lapho kunokungalingani phakathi kwama-radicals amahhala ne-antioxidant emzimbeni. Uma kungalawulwa, ukucindezeleka okwenziwe nge-oxidative kungasheshisa inqubo yokuguga futhi kuholele ezimeni ezingalapheki njengomdlavuza, isifo senhliziyo nesifo sikashukela.
Ukukhishwa kwe-cycloastragenol astragalus iyinhlanganisela enhle kakhulu ye-antioxidant futhi ithuthukisa namandla ama-antioxidants akhona ngokwemvelo. Lokhu kusiza ukubambezela ukuguga futhi kuvimbele nokuvela kwezifo ezihlobene nobudala.
I-cycloastragenol isebenza njenge-activator ye-telomerase
Njengoba kuchaziwe esigabeni esingenhla mayelana nendlela yokusebenza, i-cycloastragenol isiza ukwelula ama-telomere. Lokhu kudlala indima ebalulekile ekuqinisekiseni ukuqhubeka kokuhlukaniswa kwamaseli ngaleyo ndlela kubambezele ukuguga. Lokhu kusiza nasekugcineni izitho zomzimba zisebenza kahle.
I-cycloastragenol inikeza ukuvikelwa emisebeni ye-UV
Lapho umuntu ethola ukukhanya kwelanga isikhathi eside amaseli omzimba angalimala futhi ngenxa yalokho ahluleke ukusebenza kahle. Lokhu kuphumela ohlotsheni lokuguga ngaphambi kwesikhathi okubizwa ngokuthi ukuguga ngezithombe.
I-cycloastragenol powder iyasiza njengoba kukhonjiswa ukuvikela isikhumba emiphumeleni eyingozi yemisebe ye-UV.
I-cycloastragenol inqanda amaprotheni glycation
I-Glycation inqubo lapho ushukela onjenge-glucose noma i-fructose unamathisela ku-lipid noma iprotheni. IGlycation ingelinye lama-biomarker esifo sikashukela futhi ihlotshaniswa nokuguga kanye nokunye ukuphazamiseka.
Isengezo se-cycloastragenol isiza ukuvimbela ukuguga ngenxa ye-glycation ngokuvimbela ukwakheka kwemikhiqizo ye-glycation.
Iii.Ezinye Izinzuzo Zempilo Ezingaba khona zeCycloastragenol:
Ukwelashwa komdlavuza we-cycloastragenol
Ikhono lokwelapha umdlavuza i-cycloastragenol likhonjiswa ngamandla alo okubhubhisa amangqamuzana anomdlavuza, ukuthuthukisa amasosha omzimba kanye nokuvikela umuntu ekuphendukeni okuyingozi kwekhemotherapy.
Ocwaningweni lwabantu abanomdlavuza webele, umdlavuza we-cycloastragenol ukwelashwa kuboniswe ngamandla ayo okunciphisa ukufa cishe ngama-40%.
Kwangathi ingavikela inhliziyo ekulimaleni
I-cycloastragenol ingahlinzeka ngokuvikelwa ekungasebenzi kahle kwenhliziyo.
Ekucwaningweni kwamagundane anokulimala kwenhliziyo okubangelwa, ukutholakala kwe-cycloastragenol kwatholwa ukuqinisa ukungasebenzi kwenhliziyo ngokukhuthaza i-autophagy kumaseli we-myocardial kanye nokucindezela izinkulumo ze-matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) ne-MMP-9.
Ngokuya ngokubuyekezwa kwe-cycloastragenol, kungenzeka thuthukisa ikhwalithi yokulala. Kodwa-ke, izifundo zemitholampilo zizodingeka ukuthi zinikeze ubufakazi obuqinile emandleni ayo okuthuthukisa ukulala.
Kungasiza ekulweni nokudangala
I-telomere efushanisiwe itholakele kubantu abaphethwe yizinkinga zokucindezeleka ezifana nezinkinga zemizwelo nezifo ezifana ne-Alzheimer's.
Ekucwaningeni kwamagundane esivivinyweni sokubhukuda okuphoqelelwe, isithasiselo se-cycloastragenol esenzelwe izinsuku eziyi-7 sitholwe ukunciphisa ukungahambi kwabo. Kuboniswe ukuthi kusebenze i-telomerase kuma-neurons kanye nakumaseli e-PC1, okuchaza amandla ayo wokulwa nokudangala.
Kwangathi kungasheshisa ukuphulukiswa kwesilonda
Ukuphulukiswa kwamanxeba kuyinkinga enkulu ezigulini ezinesifo sikashukela. Le nqubo yokuphulukiswa kwesilonda yenzeka ngochungechunge lwemisebenzi. Le misebenzi yile; umsebenzi wokuvuvukala, ukujiya, ukubuyisela i-epithelium, ukwakha kabusha futhi ekugcineni ukulawulwa kwamaseli ama-stem. Lawa maseli we-epithelial stem abaluleke kakhulu ekwelapheni isilonda sikashukela.
Kuyakhonjiswa ukuthi ukonakala kwe-telomere kuthinta kabi ukuphulukiswa kwesilonda. Yilapho i-cycloastragenol powder ingena khona ukulungisa i-telomere efushanisiwe kanye nokwenza ngcono ukwanda nokunyakaza kwamaseli we-stem. Lokhu nakho kusiza ekulungisweni kwezilonda okusheshayo.
Thuthukisa impilo yezinwele
Ukubuyekezwa kwe-cycloastragenol ngabasebenzisi bomuntu siqu kukhombisa ukuthi i-cycloastragenol ingasiza ekuvikeleni ukulahleka kwezinwele, ikhuthaze ukukhula kwezinwele futhi ithuthukise umbala wezinwele.
Izinzuzo eziningi ze-cycloastragenol astragalus;
Inikela ngomsebenzi olwa namagciwane uma ulwa nama-CD4 + womuntu.
Ithuthukisa impilo yesikhumba.
Umthamo Ojwayelekile we-Cycloastragenol
Isimiso isilinganiso se-cycloastragenol cishe i-10 mg nsuku zonke. Kodwa-ke, njengoba lokhu kuyinto entsha ukwengeza umthamo wayo uzoncika kakhulu ekusetshenzisweni, eminyakeni yobudala kanye nasezimeni zokwelashwa ezingaphansi.
Lokhu kukalwa okujwayelekile kwe-cycloastragenol kufanele kukhuliswe kubantu asebekhulile abaneminyaka engaphezu kwengu-60 ukufeza ukunwetshwa okwanele kwe-telomere kanye nokunciphisa inqubo yokuguga.
Ngabe iCcyloastragenol iphephile?
I-cycloastragenol powder ngokuvamile ibhekwa njengephephile kumazinga athile wesilinganiso. Kodwa-ke, njengoba kuyinto entsha ukwengeza imiphumela emibi ye-cycloastragenol ayikaziwa.
Ukubuyekezwa okumbalwa kwe-cycloastragenol kuzinzuzo ezishiwo ze-cycloastragenol akuphelelanga ngokwanele ukukuqinisekisa ukuthi kunengqondo ukusetshenziswa.
Ngaphezu kwalokho, kunokukhathazeka ukuthi ukwengeza kwe-cycloastragenol kungasheshisa umdlavuza ngokukhuthaza ukukhula kwezimila. Lokhu ukuqagela okungokombono okususelwa ekutheni imodi yokusebenza eyinhloko ye-cycloastragenol kungukunweba kwe-telomere. Ngakho-ke kucatshangwa ukuthi kuzothuthukisa ukukhula kwesifo somdlavuza.
Ngakho-ke kuyalulekwa ukugwema ukunikeza i-cycloastragenol ezigulini ezinomdlavuza kuze kutholakale idatha ethembekile maqondana nalokhu kucatshangelwa futhi nokugwema noma iyiphi i-cycloastragenol toxicity.
Singayitholaphi i-cycloastragenol ehamba phambili?
Nokho, i-cycloastragenol powder iyathengiswa itholakala kalula ku-inthanethi nasezitolo ezahlukahlukene zokudla okunomsoco. Kodwa-ke, cwaninga njalo i-cycloastragenol powder ethengiswayo evela kubaphakeli be-cycloastragenol abagunyaziwe nabahlonishwayo ukuqinisekisa ukuthi uthola i-cycloastragenol ehlanzekile kakhulu.
I-cycloastragenol powder ikhonjisiwe ukuthi inemiphumela eminingi ezuzisayo futhi i-cycloastragenol anti-aging izakhiwo. Ukusebenza kwe-cycloastragenol telomerase kuyindlela eyinhloko yokusebenza ethi yona inyuse i-telomere. Lokhu kuboniswe ezinhlobonhlobo eziningi zezilwane nakwezinye ezimbalwa isimemo izifundo.
Izilingo zomtholampilo ze-cycloastragenol astragalus ekhipha umphumela ekwandiseni i-telomere zimbalwa kakhulu futhi ngenxa yalokho izifundo ezengeziwe zokunikeza ubufakazi obuqinile ziyadingeka.
Umphumela ongaba khona we-TA-65 ekunciphiseni ukungasebenzi kahle kwenhliziyo awujulile kakhulu njengoba kunezifundo ezinomkhawulo kakhulu ezisekela lesi senzo se-TA-65.
Ukufunda imetabolism ye-cycloastragenol ngemininingwane kuzophinde kuthuthuke kwimininingwane etholakalayo futhi kuveze noma iyiphi i-cycloastragenol toxicity engahle yenzeke ngenxa yokuqongelela ngokweqile.
Izifundo ezengeziwe zokuhlola ukusebenza kwe-cycloastragenol supplement ezinzuzweni ezibekiwe. Imiphumela emibi ye-cycloastragenol ayikaziwa. Ngakho-ke, ucwaningo kufanele luqondiswe ekutholeni okungenzeka imiphumela emibi ye-cycloastragenol kanye nokuxhumana neminye imithi.
Ekuqondeni izinzuzo zezempilo ze-cycloastragenol, kuzosiza ukuhlola izindlela ezisebenza kulezi zenzo ze-CAG.
Ngaphezu kwalokho, isilinganiso esifanele se-cycloastragenol sidinga izifundo eziningi ukuhlola isilinganiso esinconyiwe samaqembu ahlukene eminyaka. Abahlinzeki abahlukahlukene be-cycloastragenol banqume imithamo ehlukene okufanele ivumelaniswe ngocwaningo.
U-Yuan Yao noMaria Luz Fernandez (2017). “Imiphumela Yezinzuzo zeTelomerase Activator (TA-65) Yezifo Ezingamahlalakhona”. I-EC Nutrition 6.5: 176-183.
UWang, J., Wu, M.-L., Cao, S.-P., uCai, H., Zhao, Z.-M., nengoma, Y.-H. (2018). I-Cycloastragenol ivuselela ukulimala kwenhliziyo kokuhlola kumagundane ngokukhuthaza i-myocardial autophagy ngokuvimbela ukusayina kwe-AKT1-RPS6KB1. I-Biomedicine & Pharmacotherapy, 107, 1074-1081. i-doi: 10.1016 / j.biopha.2018.08.016
Ilanga, C., Jiang, M., Zhang, L., Yang, J., Zhang, G., Du, B.,… Yao, J. (2017). I-Cycloastragenol ixhumanisa ukucindezelwa kokucindezela nokwanda kumodeli ye-concanavalin A-induction yegundane lymphocyte pan-activation model. I-Immunopharmacology kanye ne-Immunotoxicology, 39 (3), 131-139. i-doi: 10.1080 / 08923973.2017.1300170.
Ip F, C, F, Ng Y, P, An H, J, Dai Y, Pang H, H, Hu Y, Q, Chin A, C, Harley C, B, Wong Y, H, Ip N, Y: I-Cycloastragenol Isishukumisi Esinamandla seTelomerase Kumaseli E-Neuronal: Imiphumela Yokuphathwa Kokucindezeleka. Ama-Neurosignals 2014; 22: 52-63. i-doi: 10.1159 / 000365290.
Yu, Yongjie & Zhou, Limin & Yang, Yajun & Liu, Yuyu. (2018). I-Cycloastragenol: Umuntu othola inoveli othokozisayo wezifo ezihambisana nobudala (Isibuyekezo). Imithi Yokuhlola Nezokwelapha. 16. 10.3892 / etm.2018.6501.
Ukubuka konke kweCycloastragenol
I-3 Mechanism of Action yeCycloastragenol
5.Idosi ejwayelekile yeCycloastragenol
6.Ngabe iCycloastragenol iphephile?
7. Singayitholaphi i-cycloastragenol ehamba phambili?
Ukucwaninga okungaphezulu kwe-8